Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! नुवाकोट लिखुको वडा कपको उपाधि आयोजक गड्खार क्लबलाई
नुवाकोट लिखुको वडा कपको उपाधि आयोजक गड्खार क्लबलाई
नुवाकोट । नुवाकोटको लिखु गाउँपालिका स्थित गड्खार जनजागरण युवा क्लबले आयोजना गरेको वडा कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि आयोजक टीम गड्खार जनजागरण युवा क्लबले हात पारेको छ । मंगलबार सम्पन्न फाइनल खेलमा गड्खार जनजागरण युवा क्लबले गड्खार ओरिजिनल क्लबलाई २–१ गोल अन्तरले पराजित गरी प्रथम भएको हो ।
लिखु गाउँपालिका वडा नंम्बर ४ को क्षेत्रपाल उमाविको खेलमैदानमा भएको उक्त फानइनल खेलको उद्घाटन वाग्मती प्रदेश उपसभामुख राधिका तामाङले गर्नुभएको थियो । लिखु गाउँपालिकाका चारवटा वडाबाट दस टीम सहभागि उक्त प्रतियोगिता भाद्र १५ गतेबाट प्रारम्भ भएको थियो ।
विजयी प्रथम टीमलाई वडा कप, नगद रु. २५ हजार, मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो भने दोश्रो टीमलाई कप, १५ हजार नगदसहित मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको आयोजक क्लबका अध्यक्ष सन्तोष राईले जानकारी दिनुभयो । प्रतियोगिताको सर्वाधिक गोलकर्ता चण्डी युवा क्लबका मनिष राईले ७ गोल गर्नुभएको थियो भने उत्कृष्ट खेलाडि गड्खार जनजागरण युवा क्लबका पुजन राई र उत्कृष्ट गोलकिपर सोही टीमका नविन राई चयन हुनुभएको छ ।
क्लबले २०७५ सालमा जिल्ला स्तरीय प्रथम जनजागरण फुटबल कपको आयोजना गरेको थियो । यस वर्ष असोजमा जिल्ला स्तरीय फुटबल प्रतियोगिता आयोजना गरिने अध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभएको छ ।
फाइनल खेल तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष भोलाप्रसाद सेंढाई, वडा ४ का कार्यबाहक अध्यक्ष पदमबहादुर राई, नेपाल महिला रग्बी टीमका कप्तान एलिसा थापा, माओवादी केन्द्र लिखु गाउँपालिका सचिव विवेक ढकाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ २२, २०७८, २०:१५:००